काँचो आँप खाने गर्नु भएको छ ? यि हुन् काँचो आँप खानुको फाइदा ! सबैले जानी राखौं – Annapurna Daily
काँचो आँप खाने गर्नु भएको छ ? यि हुन् काँचो आँप खानुको फाइदा ! सबैले जानी राखौं
On Jun 14, 2021 1,181
अहिलेको मौसममा जताततै फाइने फलफूल हो आँप । गर्मी मौसममा पाईने फलफूल मध्येको आँप निकै स्वादिलो हुने गर्छ । धेरै जसोले पाकेको आँप निकै स्वाद लिएर खाने गर्दछन् तर काँचो आँप खानुको पनि उत्तिकै फाइदा छ । कतिपयलाई काँचो आँप पनि निकै स्वादिलो लाग्छ । काँचो आँप स्वाद र स्वास्थ्य दुवैको लागि फाईदाजनक छ । आज हामी काँचो आँपले पुर्याउने पाँच फाईदाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।
१. यदि तपाईलाई एसिडिटी, ग्यास वा अपच जस्ता समस्या रहेको छ भने काँचो आँप खानाले यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यसले पेटमा हुने विकार हटाउन मद्धत गर्छ ।
२. काँचो आप नियमित सेवन गर्नाले कपाल कालो बनाउँछ साथै छालालाई दाग रहित बनाउन पनि यसले भुमिका खेल्छ । ३. सुगरको विरामीले काँचो आँप खाने हो भने सुगरको लेवल कम गर्छ । काँचो आँपले शरीरमा आईरनको कमीलाई पूरा गर्दछ ।
४. काँचो आँपमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाईने हुनाले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकाश गर्दछ । ५. यदि तपाईलाई अत्यधिक पसिना आउँछ भने तपाई काँचो आँपको प्रयोगबाट यसलाई कम गर्न सक्नुहुनेछ ।
यो पनि पढ्नुस: घरको भान्सामा साङला लागेर हैरान हुनुभएको छ ? कुनै औषधीको प्रयोग नगरी, भान्सामा पाइने यी सामग्री देखी साङला,मच्छर,मुसा बाट भर्खरै पाउनुहोस् छुटकारा
एजेन्सी । मुसा , झिंगा , उडुस आदिको कारणले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने आज हामी तपाइंलाई यसबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपायको बारेमा जानकारी दिन्छौं । यो तरिका निकै नै सजिलो छ :-
१) मुसा: मुसालाई पुदिनाको गन्ध मनपर्दैन । यदि तपाई मुसाले गर्दा दिक्क हुनुभएको छ भने, कपासको सानो टुक्रामा पुदिना हालेर मुसा आउने सम्भावित ठाउँमा राख्नुहोस् । यसको गन्धले मुसालाई श्वास फेर्नमा गाह्रो हुन्छ । जस्ले गर्दा मुसा मर्छ ।
२) साङ्ला: मरिच , प्याज र लसुनलाई पिसेर पानीसँग मिसाएर मिश्रण बनाउनुहोस् । यस मिश्रणलाई साङ्ला आउने ठाउँमा छर्किनुहोस् । यसको गन्धलाई सहन नसकि साङ्ला भाग्छ ।
३) झिंगा: झिंगाबाट छुट्कारा पाउनको लागि घरलाई सफा राख्न जरुरी छ । यसका साथै ढोका सधैं बन्द गनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नाले पनि झिंगा आउने समस्या हुन्छ भने, कपासलाई धेरै गन्ध आउने तेलमा डुबाएर ढोकासँगै राख्नुहोस् । तेलको गन्धले गर्दा झिंगाहरु बाहिर जाने गर्छन् ।
४) उडुस: प्याजको रस उडुसलाई मार्नको लागि राम्रो औषधि हो । यसको गन्धले श्वास फेर्नमा उडुसलाई कठिनाई हुन्छ , जस्ले गर्दा उडुस तुरुन्तै मर्छ ।
५) माउसुली: माउसुलीलाई घरबाट भगाउने यो निकै नै राम्रो तरिका हो । ५–६ मयुरको प्वाँखलाई भित्तामा टाँस्नाले केही दिनमै माउसुली गायब हुन्छ । मयुरले माउसुलीलाई खान्छ । यसै कारणले गर्दा छेपारो मयुरको प्वाँख देख्ने बितिक्कै भाग्ने हुन्छ । यदि मयुरको प्वाँख पाउन सक्नुहन्न भने, अन्य चराको प्वाँखलाई पनि हाल्न सक्नुहुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा